Waa maxay corona maxaan ka qaban karaa?
Coronavirus ama corona waa jeermis yar (oo aad u yar oo aan lagu arki karin indhaha) kaas oo faafi kara oo sababi kara cudur dadka. Corona waxay keentaa astaamo u eg hargab sida qufac qalalan, neefta oo ku qabata, qandho, iyo xanuun jirka ah. Corona badanaa waxay saameysaa nidaamka neefsashada. In kasta oo caabuqyada badankood aysan khatar aheyn, waxayse sababi karaan oof wareenka (caabuq halis ah oo ku dhaca sambabaha) waxayna u dhintaan xaaladaha daran.
Qof kasta ayaa uu ku dhici kara corona. Dadka da'da ah iyo dadka horeyba u qabay cuduro kale, tusaale ahaan cudurada neefsashada, kansarka ama sonkorowga, waxay halis ugu jiraan inay la kulmaan saameyn aad u daran.
Corona wuxuu ku fidaa qof cudurka qaba dhibco dhibco ah oo lasii daayo markay neefsadaan, qufacaan, ama ku hindhisaan dadka, sagxadaha, ama cuntada. Wuxuu ku galaa jirka afkiisa, sankiisa, iyo indhaha. Marka jidhka ka mid ah, wuxuu bilaabaa inuu tarmo oo ku faafo meelaha kale. Corona wuxuu ku noolaan karaa jirka illaa 14 maalmood kahor calaamadaha kore ee cudurka jirku soo muuqdo. Marka dadku waxay yeelan karaan corona mana oga, waxayna u gudbiyaan fayraska dadka kale.
Waqtigaan la joogo ma jiro wax tallaal ama daawo gaar ah oo loogu talagalay corona. Corona looma dilo antibiyootig ama dawo guri. Corona waxaa looga hortegi karaa oo keliya in laga fogaado taabashada iyo gacmo dhaqida joogta ah.
Si looga hortago infekshinka, gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo. Sidaas yeel, xitaa marka gacmahaagu aysan u muuqan wasakh. Si adag ugu dhaq biyo biyo socda 20 ilbiriqsi saabuun, hubso inaad xoqdo gacmaha ciddiyaha oo aad ku daboosho gacanta oo dhan iyo gacanta. Gacmahaaga ku maydho saabuun iyo biyo waxay dishaa fayrasyo gacmahaaga ku jiri kara. Had iyo jeer gacmaha iska dhaq, ka hor iyo ka dib markaad cuntada diyaarisid, ka dib isticmaalidda musqusha, ka hor intaadan wax cunin, markaad daryeeleyso bukaanka, ka dib markaad taabato xayawaanka ama qashinka xayawaanka, iyo ka dib markaad qufacdo, hindhisto, ama sanka kaa gasho.
Ka fogow taabashada indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga adigoon marka hore dhaqin gacmahaaga. Gacmuhu waxay taabanayaan meelaha dusha sare waxayna ka qaadi karaan fayras. Mar alla markay wasakhoobaan, gacmuhu waxay u gudbin karaan fayraska indhahaaga, sankaaga ama afkaaga. Laga soo bilaabo halkaas, fayrasku jirkaaga ayuu geli karaa wuuna ku xanuunsiin karaa.
Aad ayey muhiim u tahay in laga fogaado xiriir dhaw oo lala yeesho qof kasta oo qabo qandho iyo qufac ama astaamaha neefsashada. Markaad qufacayso ama aad hindhisayso, had iyo jeer afkaaga iyo sankaaga ku dabool xusulkaaga dabacsan ama warqad. Kadib tuur unugyada aad isticmaashay isla markiiba. Ha ku tufin dadweynaha.
Joog ugu yaraan 1 mitir (3 fuudh) masaafada u dhaxaysa naftaada iyo qof kasta oo qufacaya ama hindhisayo. Ka fogow xiriir dhaw oo lala yeesho qof kasta oo qandho iyo qufac leh.
Haddii aad u baahan tahay inaad daryeesho qof qaba qandho, qufac iyo neefsashada oo adag, ha iloobin inaad xirato weji dabool ama maaskaro maro ah iyo gaar ahaan, inaad ku celceliso nadaafadda gacanta.
Si looga hortago cudurka 'corona', waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado taabashada jirka ee dadka kale. Corona iyo fayrasyada kale waxaa lagu kala qaadi karaa adigoo gacan qaadaya oo hadhowna taabashada indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga. Markaa markaad la kulmayso dadka kale, ha salaaman adigoo gacan qaadaya, isdifaacaya ama dhunkanaya. Ku salaamee dadka mowjadda, gogosha ama qaansada. Haddii aad u maleynaysid inay deegaanka ka jiraan corona, guriga joog si aad uga fogaato inaad la xiriirto dadka kale.
Guriga joog haddii aad bilowdo inaad dareento caafimaad darro, xitaa astaamo fudud sida madax xanuun iyo san duuf yar, ilaa aad ka bogsato. Haddii aad hindhisto, qufac qalalan, neefsashada oo ku dhibto iyo qandho, raadso kaalmo caafimaad goor hore maadaama ay taasi u sabab tahay caabuqa neefsashada ama xaalad kale oo daran.
Waxyaabaha ay aaminsan yihiin beenta iyo xanta ku saabsan corona-ga waxay noqon karaan kuwo aad khatar u ah xitaa dad dil. Tusaale ahaan, cabitaanka maandooriyaha sida warankilada ama aalkolada ayaa wax kuu dhimi doonta halkii aad ka hortagi lahayd cudurka maskaxda. Xitaa macluumaadka aad ka hesho saaxiibada ama ehelkaaga ayaa noqon kara mid khaldan ama qatar ah. Kaliya raac talada caafimaadka bulshada ee saxda ah maamulka caafimaadka deegaankaaga.
Waxaad ka caawin kartaa la-dagaallanka corona adigoo faafinaya fariintan. Fadlan la wadaag asxaabtaada iyo qoyskaaga, iyadoo la doorbidayo inaad isticmaasho adeegga farriinta sida WhatsApp.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay fariintani waxaa suurto galiyey Audiopedia, oo ah mashruuc caalami ah si looga dhigo mid lagu maqli karo aqoonta caafimaadka Faahfaahin dheeri ah ka baro www.audiopedia.org